5 Anotyisa Maturu Ekushambadzira Zvemukati Minimalists | Martech Zone
Ini ndinozviona semunhu mudiki mukushambadzira zvemukati. Ini handidi makarenda akaomeswa, mashehedhi uye maturusi ekushandisa-kwandiri, zvinoita kuti maitiro acho anyanyooma kupfuura zvaanofanira kuve. Pasina kutaura, ivo vanoita zvemukati vatengesi vakaomarara. Kana iwe urikushandisa-yemwedzi mitanhatu yezviri mukati makarenda ekuronga chishandiso-icho chako kambani chiri kubhadhara-iwe unonzwa uchisungirwa kunamatira kune yega ruzivo rweiyo chirongwa. Nekudaro, ivo vepamusoro vatengesi vezvinhu vakashama, vakagadzirira kuchinjisa zvemukati kutenderedza sezvo mashedhiyo achinja, zviitiko zvinomuka kana zvikumbiro zvikaitwa.
Ini ndiri vaviri minimalist uye ndine hunyanzvi mubasa rangu, saka ndichiri kuvimba nezvishandiso zvishoma zvekutsvaga, kuronga, kugadzirisa uye nezvimwe, zvese zviri kumberi uye zvakasununguka. Nhasi ndiri kugovera mashoma angu andinoda kuti akubatsire kurerutsa mutoro pane zvako zvemukati zvekushambadzira kuedza.
Ye: Photo Editing uye Kugadzira Graphics
Kunyangwe zvingave zvakanaka kudzidza uye kushandisa chishandiso senge Adobe Photoshop yekugadzirisa mapikicha, ini handina nguva yekuidzidza, kana mari yekuzvibhadharira. Ndakatanga kushandisa Photoscape X (chete yeMac; ndine hurombo vashandisi veWindows) makore mashoma apfuura uye zvino vimba nazvo chero uye zvese zvekugadzirisa mapikicha kana grafiki gadzira yandinoita, inova yakawanda.
Ini ndinogona kuita zvakajairika kudhirowa, kusanganisira kutema, kugadziridza ruvara uye kugadzirisa, uye kugadzirisa saizi. Izvo ini zvandinoshandisa Photoscape kune mazhinji, zvisinei, ndiwo mupepeti, kwaunogona kuwedzera mavara, maumbirwo, mavara, uye zvimwe kumifananidzo. Izvi zvinobatsira kugadzira mifananidzo yemagariro, asi zvakare yekuwedzera miseve kana mabhokisi kuzvidzitiro (semifananidzo iri mune ino positi), izvo zvakakosha kana uchinyora zvidimbu zvekudzidzisa kana kukumbira dhizaini dhizaini kune zvako zvemukati
Ini ndinoshandisa Photoscape kugadzira yemagariro midhiya mifananidzo yeumwe wevatengi vangu uye iwe unogona kuona zvimwe zvakapedzwa zvigadzirwa pazasi. (Cherekedza: iyo kholaji yemifananidzo yakaitwawo neFotoscape!)
Bulk Domain Chiremera Chekuongorora Chishandiso
Basa rangu semushambadziri wezvemukati rinosanganisira kuongorora kukosha kwemawebhusaiti akasiyana siyana, neimwe metric yakakosha kuve Domain Authority. Kunyange paine akati wandei emidziyo yakabhadharwa iwe yaunogona kushandisa, ini ndawana yakanakisa, yakapusa uye yakavimbika ndeye iyi chaiyo yewebhu-yakavakirwa chishandiso. Iyo pfungwa iri nyore sezvazvinonzwika: iwe unoteedzera uye unama runyorwa rwemawebhusaiti, tarisa mabhokisi e data iwe raunoda kuti riwane (Domain Authority, Peji Chiremera, Moz Chinzvimbo, IP Kero), uye wozomirira mhedzisiro kuti igare pazasi.
Izvi zvakanaka kana iwe uchitsvaga webhusaiti padanho rakakura uchishandisa Google Sheets nekuti iwe unogona kuteedzera uye kunama zvakananga kubva kune jira muchigadzirwa. Hapana mamwe matanho, hapana kuwedzera makoma-kugadzira izvo zvingangodaro riri basa rinonetesa, nyore nyore uye kurongeka. Iwe zvakare haudi account, zvinoreva kuti une password shoma yekurangarira.
Ye: Kuronga uye Kuteerera Kwemagariro
Ini ndaida kuisa zvese izvi nekuti ini parizvino ndinozvishandisa zvese uye ndinozviona sezvigadzirwa zvakafanana zvine simba rakasiyana. Kune akawanda akabhadharwa maturusi anowanikwa, uye ndashandisa mazhinji acho, asi kana zvasvika kune akapusa, emahara maturusi, izvi ndizvo zvandinofarira. Izvi ndizvo zvandinoda nezveumwe neumwe:
Kuronga: Simba reBuffer revashambadzi vezvinhu nderekuti rakachena uye nyore kufamba. Pasina yakaoma interface, iwe unogona kuona zviri nyore zvakarongwa uye ndeapi makiteshi asina chinhu. Iyo analytics mune yavo yemahara chishandiso ishoma, asi ichiri kukosha.
Zvese zvemagariro: Hootsuite inoshanda zvakanyanya seyese yekuteerera chishandiso pasina kukurira Changu chandinofarira cheichi chishandiso kugona kuwedzera hova kuti dziongorore kutaurwa, akasiyana mazwi akakosha kana kunyatso tungamira mameseji pane ega maakaunzi. Ipo ichishandawo sedhizaini yekushandisa inoshanda sezvingatarisirwa, maakaundi emahara haana mukana wekuwana analytics.
Ratidza Maka (TickTick)
Kune akawanda akaronga uye eku-ita zvinyorwa zveapurogiramu uye zvakanditorera makore kuti ndiwane imwe ndizvo chaizvo zvandanga ndichitsvaga. Dambudziko rekuita-rondedzero maapplication kuti akaomesesa sei-mazhinji anoda basa rega rega kuve nezuva rakatarwa, semuenzaniso, kana kushandisa dzakaomarara nzvimbo dzakatarisana nemabasa ako masikati, zvichiita kuti zvive zvakaoma kuona vhiki rako rese kamwechete.
TickTick ndizvo zvese zvandaitsvaga uye nezvimwe, uye zvakakwana kune zvemukati mushambadzi anotungamira akawanda maakaunzi kana vatengi. Hezvino izvo zvinoita kuti ive yakakwana kune minimalist yemukati mushambadzi:
MuTabhu Yese, unogona kuona mabasa kune mumwe nemumwe mutengi panguva imwechete. Mutengi wega wega anorarama seyavo "rondedzero", zvinova zvauri kuona pazasi:
Iwe unogona zvakare kutarisa pane yega rondedzero wega, kuti paunenge uchifamba kuburikidza nezuva rako rekushanda, unokwanisa kutarisa kune mumwe chete mutengi, zvichiita kuti zvive nyore kuramba uri pabasa pasina kutsauswa.
Iyo nhamba yekutanga ficha yandinotsvaga, zvisinei, iri kukwanisa kutarisa mabasa kubva pane iyo chinyorwa. NaTickTick, chero chinhu chakatariswa kubva pakurongwa chinogara pasi, zvichiita kuti zvive nyore kuudza zvakare kune vanobatana kana zvichidikanwa, kana kuteedzera zvawakaita zuva irori.
Iwe unogona zvakare kushandisa izvi seyakagadziriswa kuronga chishandiso, ine runyorwa rwemwedzi wega wega uye zvemukati zvaunoronga kugadzira. Nekuti iwe unogona kuwedzera akakodzera misi, zvinyorwa, chinhanho chekutanga uye mabhokisi ekutarisa mukati merondedzero nzvimbo, unokwanisa kuronga yega yega ruzivo zviri nyore.
HARO uye Clearbit
Ye: Kutsvaga Zvishandiso
Zvekare, ini ndaida kusanganisa ese ari maviri nekuti anoshanda zvakafanana chinangwa - asi akasiyana zvakanyanya panguva imwe chete. HARO (Batsira Mutapi Wekunze) ishoma chishandiso, uye yakawanda yebasa, asi yakakosha kwazvo kwandiri semushambadzi wezvemukati nekuti iri nyore kushandisa. Haufanire kugadzira account kana iwe usiri kuda, uye mhinduro dzese kumubvunzo wako dzichauya kuinbox kwako-kwaunotopedzera yakawanda yenguva yako zvakadaro. Kana iwe uchida kutsvaga masosi echinyorwa, iyi ndiyo nzira yekuzviita.
Clearbit ndeimwe nzira yekutsvaga zvinyorwa, asi ini ndinoishandisawo kubatana nevaridzi vewebhu uye vaparidzi. Iyo inogara mubhokisi rako rekushandisa sewedzero, uye inobvumidza iwe kutsvagira vanobata kune angangoita chero webhusaiti-ese ari mukati mebhokisi rako rekushandisa. Semutengesi wemukati uyo anoshanyira zvinyorwa uye anogara achibatana nevamwe vapepeti nevatengesi, ini ndinoshandisa chishandiso ichi zuva rega rega.
Minimalist hazvireve kuti haishande
Haufanire kushandisa akaomarara, anodhura maturusi nekuda kwekuti anowanikwa. Nepo zvimwe zvingave zvichidikanwa kune-bhizinesi-chikamu chemukati kushambadzira manejimendi, kana iwe wakaita seni, kubata vashoma vashoma vevatengi, kana kushanda pasangano rimwe chete, izvi ndizvo zvese zvaunoda. Vabatanidze neGoogle Drive (Sheets uye maDoc), Gmail nevamwe, uye iwe unogona kurongeka uye kubudirira pasina kurasika musanganiswa yezvishandiso zvakaoma.
Tags: bufferhombe chiremera chekutarisaclearbitGmailGoogle DriveGoogle Sheetsitikwakajeka pataniharohootsuitephotos foraphotoscapemufananidzo xtsvakurudzorobin guptazvitubuchishambwe
Jessica, ndinoda Chiremera cheki wawataura.
Unoitei mushure mekunge wawana kukosha kwemawebhusaiti kana iwe usingade kugovera?